ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးထိုင်ခုံအကာအကွယ်များ: သင်၏ကားကိုဂရုစိုက်ပါ။ အ | ခွေးကမ္ဘာ
Susana godoy | 23/09/2021 12:14 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ငါတို့ကငါတို့ခွေးတွေနဲ့ခရီးတွေမျိုးစုံလုပ်ရတာကြိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်သက်တောင့်သက်သာဆုံးအရာသည်ကားထဲတွင်သယ်ရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတော်လေးသတိထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ခွေးများသည်မရပ်ဘဲနေလျှင်သူတို့ကထိုင်ခုံအားလုံးကိုအမွေးများဖြည့်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုလိုအပ်သည် ခွေးများအတွက်ကားထိုင်ခုံအတွက်အကာအကွယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်အခြေအနေကိုဂရုစိုက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေသောအခြေခံအကျဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကအားလုံးအားသာချက်ဖြစ်လျှင်! ယနေ့သူတို့ကိုသင်သာမကအရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည် ကားထိုင်ခုံအကာအကွယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကမင်းလိုအပ်တာကိုအမြဲတမ်းရွေးချင်တာ။
ဒါကတော့ခွေးတွေအတွက်ဆံပင်နဲ့အခြားဖုန်မှုန့်တွေမ ၀ င်အောင်ကာကွယ်ဖို့ခွေးတွေအတွက်အကြံပြုထားတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။
Pecute ခွေးကိစ္စ ...
AMZPET ထိုင်ခုံအဖုံးများ ...
အမှန်တရားသည်၎င်းသည်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်အလွန်အကြံပြုသည်။ ငါတို့ကခရီးရှည်တွေသွားရင်အဲဒါကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့တစ်နေရာရာကိုသူနဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်ငါတို့ကားသွားရမယ်ဆိုရင်အဲဒါကကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကအသက်ရှူရလွယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မျိုးမှာနေရာလွတ်ရှိလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့ကားကိုဂရုစိုက်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေတုန်းဘဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကငှက်နှစ်ကောင်ကိုကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုနဲ့သတ်လိုက်တယ် သက်တောင့်သက်သာနှင့်သန့်ရှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသယ်ဆောင်သူ (သို့) ၎င်းတို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားသောထိုင်ခုံများနှင့်ကားပေါ်တွင်အလွယ်တကူနေရာချခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူများစွာရှိသည်။ အာရုံထွေပြားမှုမရှိဘဲမောင်းနှင်မှုကိုပြီးပြည့်စုံစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့လမ်းလျှောက်တာကလယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအနီးမှာရှိခဲ့ရင် မင်းကားထဲမှာဖုန်တွေကင်းဝေးလိမ့်မယ် ၎င်းသည်၎င်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ အနံ့မရ။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သာမန်အားဖြင့်ဤအကြောင်းကြောင့်ထိုင်ခုံများထက်အဖုံး၌အမြဲနေခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
သူတို့မှာပုံမှန်အားဖြင့်မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်အသုံး ၀ င်ပစ္စည်းတွေကိုသိုလှောင်နိုင်တဲ့အိတ်တွေ၊ အခန်းတွေရှိတယ်။
၎င်းသည်ထိုင်ခုံများပေါ်တွင်သက်တောင့်သက်သာထားနိုင်သောအခြေခံအဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်စည်အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခရီးသွားရမည့်အပိုင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်ဖြန့်ရမည့်ကျယ်ပြန့်သောအဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့မလှုပ်နိုင်အောင်ကောင်းကောင်းထိန်းထားရမယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ သူတို့မှာများသောအားဖြင့် headrests တွေကိုချိတ်မယ့်သိုင်းကြိုးတွေရှိတယ်မရ။ အများစုတွင်ထိုင်ခုံခါးပတ်များပါ ၀ င်သောတံခါးများပါ ၀ င်သည်။
Wimypet မော်တော်ကား ကြံ့ခိုင်ရေး...
မင်းရဲ့ခွေးကပိုသေးပြီးဇီဇာကြောင်တာကြောင့်အဖုံးအပြည့်မလိုချင်ရင်ကားထိုင်ခုံနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုင်ခုံအမျိုးအစားတစ်ခုစီရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကားဆိုဖာများပေါ်တွင်ကျောက်ချထားလိမ့်မည်မရ။ ကလေးထိုင်ခုံများနှင့်ဆင်တူသော်လည်းဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဖြစ်သည်။ မင်းအဲဒါကိုကောင်းကောင်းကိုင်ရမယ်၊ တစ်ခါလုပ်ရင်သူတို့မှာသယ်ဖို့ခါးပတ်ပုံစံပုံသိုင်းကြိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။ ဤနည်းအားကျွန်ုပ်တို့ဘီး၌ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေနိုင်သောအာရုံထွေပြားမှုများကိုရှောင်ရှားသည်။ ၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်ရေစိုခံနိုင်ပြီးလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းစေရန် mesh finishes ပါ ၀ င်သည်။
ခိုင်မာသောတိရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါခုခံအားကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခွေးတွေအားလုံးဟာညီတူညီမျှအေးအေးဆေးဆေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါတို့သိတာကြောင့်အဲဒါကငါတို့ရဲ့ခွေးမွေးခွေးတွေရဲ့ခြေသည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့ပံ့ပိုးပေးမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာလိမ့်မယ်။ ခွေးပုံစံကားမော်ဒယ်ထိုင်ခုံတော်တော်များများမှာအကာအကွယ်၊ padded လာသည် ၎င်းသည်၎င်းကိုပိုမိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိစေသည်။
ရေစိုခံခရီးစဉ်အတွင်းသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောမည်သည့်ပြသနာကိုမဆိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အမြဲအကြံပြုလိုပါသည် ကာကွယ်သူသည်ရေစိုခံကြောင်းသေချာပါစေမရ။ မင်းရဲ့ဇီဝကမ္မလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဘဲ၊ မင်းခြေထောက်တွေစိုနေသေးတာနဲ့ကားထဲကို ၀ င်နိုင်တာကြောင့်ဒါကအစိုဓာတ်ကိုဖြစ်စေပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်အရာအားလုံးသည်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိသောကိစ္စ၌ရှိလိမ့်မည်။
ခွေး၏ခါးပတ်ကိုကျော်ရန်အပေါက်များနှင့် များသောအားဖြင့်သူတို့ကအဲဒါကိုယူလာတာကိုး၊ ဒါကြောင့်ခရီးသွားတဲ့အခါပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာသေချာတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့မနာပါဘူး အပေါက်များ (သို့) အပေါက်များရှိသည်မရ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုကောင်းကောင်းအထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့်ခါးပတ်တွေ၊ အထောက်အပံ့တွေကိုဖြတ်သွားရမယ့်နေရာရှိလိမ့်မယ်။
ခေါင်းစည်းများဖြင့် အဖုံးများကိုကားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ရွေ့လျားမှုများနှင့်အတူမရွေ့စေရန်၎င်းတို့သည်ရှည်လျားသောအမြှောင်းပုံစံများကဲ့သို့ကျောက်ဆူးတစ်မျိုးလည်းရှိရမည်။ headrests နှင့်တွဲလိမ့်မည်မရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖုံးပုံသဏ္န်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့ကိုကျောဘက်သို့သာမကရှေ့ဖက်သို့ပါတွဲနိုင်သည်။
စလစ်ဆန့်ကျင်ရေး-သန့်ရှင်းရလွယ်ကူပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောသို့မဟုတ်ရေစိုခံအဖုံးကိုစဉ်းစားရန်အပြင်၊ အဲဒါကချော်လဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့မေ့လို့မရဘူးမရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်သည်ခရီးစဉ်အတွင်းချော်လဲခြင်းသို့မဟုတ်ရွေ့ခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေလိမ့်မည်။ ဒါကပိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကငါတို့ကလမ်းကိုပိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။
အမေဇုံတစ်ဖန်အမေဇုန်သည်ခွေးများအတွက်အဖုံးအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ကားထိုင်ခုံအကာအကွယ်မျိုးစုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသောအချောထည်များနှင့်အတူသန့်ရှင်းရလွယ်ကူပြီးသင့်ယာဉ်များကိုလုံး ၀ ပုံသွင်းပေးလိမ့်မည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုလောင်းခြင်းအပြင်အဖုံးများတွင်သာမကထိုင်ခုံအားမြှင့်တင်ခုံများတွင်ပါကစားခြင်း။
Lidl: ဤစူပါမားကတ်သည်အိမ်အတွက်သာမကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ပါအသုံးအဆောင်များကိုအမြဲရွေးချယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအခြေအနေတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်စျေးသက်သာသောထိုင်ခုံအဖုံးသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သောရိုးရှင်းသောထိုင်ခုံအဖုံးတစ်ခုရရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
CarrefourCarrefour သည်စျေးအသက်သာဆုံးအဖုံးများထဲမှတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့အတွက်ကြိုးများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်မော်ဒယ်များစွာပါ ၀ င်သည်။ နောက်ထပ်ငါတို့ဘာတောင်းနိုင်လဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ခွေးကားထိုင်ခုံကာကွယ်သူ
ခွေးများအတွက်ပိုးသတ်ဆေးများ - သဘာဝနှင့်အတု